Fanakatonana ofisialy ny fiofanana fahatelo momba ny fitaovana TADAT, Direction Générale des Impôts
Antananarivo, 14 Desambra 2021.
Lanonam-pamaranana amin’ny fomba ofisialy ny fiofanana fahatelo momba ny fitaovana TADAT sy ny fanolorana mari-pankasitrahana ho an’ireo mpandray anjara miisa 51 avy amin’ireo fampisondrotana roa farany nahavita soa aman-tsara ny fiofanana, izany hoe 20 mpiadina nohamarinina tamin’ny taona 2019 sy 31 (anisan’izany ny 03 avy amin’ireo mpiara-miombon’antoka ara-teknika sy ara-bola). tamin’ny taona 2020, natao ny 14 desambra teo tetsy Anosy.
Raha ny marina, ao anatin’ny fanavaozana notarihin’ny Tale General Tax Direction (DGI) hanatsarana ny fidiram-bolan’ny hetra, dia natomboka ny volana septambra 2019 ny fiofanana ho an’ny ekipa mpitantana ny fitantanan-ketra momba ny Tax Administration Diagnostic Assessment Tool (TADAT) ), dia tamin'ny Janoary sy Febroary 2021 (onja faha-2).
Notanterahina ny 6 desambra ka hatramin’ny 13 desambra 2021 araka izany ny fiofanana fahatelo manodidina ny fitaovana TADAT, teo ambany fiahian’ny sekretera jeneralin’ny toekarena sy ny fitantanam-bola Andry Velomiadana Bearrison RAMAMANAMPANOHARANA. Nahatratra sehatra midadasika kokoa ity fotoam-piofanana farany ity, toy ny mpitantana sy ny lehiben’ny sampana miasa ao amin’ny DGI, ny solontenan’ny sampan-draharaha hafa ao amin’ny MEF (Direction Général de la Douanes, Direction de Audit Intern), Court of Auditors, EDBM, CSI, solontenan’ny ny sehatra tsy miankina sy ny solontenan’ny fikambanan’ny fiarahamonim-pirenena (CSO), miisa 50 ny mpandray anjara.
Araka izany, ao anatin’ny vinan’ny “administration innovative, mangarahara ary andrin’ny fivoahana”, ny DGI, miara-miasa amin’ny Sekretariat TADAT, ny Fihaonambe momba ny fitantanan-ketra afrikanina (ATAF), ary tohanan’ny Banky iraisam-pirenena amin’ny alalan’ny fanohanan’ny seha-panjakana. Ny tetikasa (PAPSP) sy ny Tahirim-bola iraisam-pirenena (FMI), dia nahatonga ny olona ivelan'ny fitantanan-ketra, indrindra fa ireo mavitrika amin'ny fitantanam-bolam-panjakana sy ny tamberin'andraikitra ara-tsosialy, ny fitaovana TADAT ary ny asan'ny hetra.
Raha tsiahivina, fitaovana novolavolain’ny mpiara-miombon’antoka iraisam-pirenena ny fitaovana TADAT, miaraka amin’ny fandraisan’anjaran’ireo manampahaizana maro isan-karazany, hanampy amin’ny fanatanterahana ny fitantanana ny hetra ho mahomby sy ara-drariny. Io fitaovana io dia ahafahan'ny DGI manao fanombanana ny tenany, mandrefy tsy tapaka ny zava-bitany, ary miaraka amin'izay koa mahita ireo teboka malemy ara-potoana, avy eo mandray ny fepetra mifandraika amin'izany, mifanaraka amin'ny fanao iraisam-pirenena tsara.